दुवै चरणको निर्वाचनमा कसले पाए कति मत? | Nagarik News - Nepal Republic Media
दुवै चरणको निर्वाचनमा कसले पाए कति मत?
काठमाडौं— स्थानीय चुनावमा ठूला तीन दल एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेकका दलले नगन्य मत प्राप्त गरेका छन्। गाउँ-नगर-उपमहानगर-महानगरपालिकाका प्रमुख-अध्यक्षका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्दा साना दलको अस्तित्व संकटमा देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार दुई चरणमा भएको स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा धेरै एमालेले ३७ प्रतिशत मत पाएको छ। कांग्रेसले ३५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले १७ प्रतिशत मत पाएर तेस्रो स्थान ओगटेको छ।
वैशाख ३१ र असार १४ गरी ६ वटा प्रदेशमा भएको चुनावमा यस्तो मत परिणाम देखिएको हो । राप्रपासहित केही साना दलले ११ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन्।
स्थानीय चुनावमा भाग लिएकामध्ये २१ दलले हजारभन्दा कम मत पाएका छन्। त्यसमध्ये ६ दलले प्रमुख पदमा शून्य मत पाएका छन् । लोक दल, संघीय लोकतान्त्रिक थरुहट, नेपाल लोकतान्त्रिक जनता कांग्रेस पार्टी, देशभक्त समाज दलबाट प्रमुख पदमा उठेका उम्मेदवारले मत पाउन सकेनन् ।
२० वर्षपछि भएको स्थानीय तह चुनावमा २०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावसँग मिल्दोजुल्दो मत परिणाम देखिएको छ। त्यसबेला माओवादीले चुनावमा भाग लिएको थिएन। तेस्रो स्थानमा राप्रपा थियो । यसपटक भने राप्रपा ३ प्रतिशत मतमा सीमित बनेको छ। त्यतिबेलाको राप्रपाको स्थान अहिले माओवादी केन्द्रले लिएको छ।
सबै राजनीतिक दलले प्रमुख/अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मानेर मत प्रतिशत निकालिएको छ । जसमा एमालेले २७ लाख ५३ हजार ७ सय मत लिएको छ । कांग्रेसले २६ लाख ५८ हजार ९ सय मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले १२ लाख ६९ हजार ९ सय मत लिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
चौथो स्थानमा देखिएको राप्रपाले २ लाख ३९ हजार ७ सय मत पाएको छ। अन्य साना दलले ५ लाख ८४ हजार ८ सय मत पाएका छन्।
दुई चरणमा गरी ४० दलले भाग लिएका थिए । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलले पनि २ प्रतिशत मत कटाउन सकेका छैनन् । संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल दर मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक ) ले मुस्किलले २ प्रतिशत मत ल्याएका छन् । साना दुई दलले मात्र एक प्रतिशत ल्याएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टीले १ प्रतिशत मत ल्याएका छन् । स्वतन्त्रबाट उठेका उम्मेदवारले २ प्रतिशत मत ल्याएका छन् । बाँकी सबै साना दलले हजारभन्दा कम मत ल्याएका छन् ।
दुवै चरणको निर्वाचनमा कसले पाए कति मत